I-Hyper RPG Amandla ayo kwi-YouTube kunye neTwitch Live Streaming Workflows nge-Blackmagic Design - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcastaster ye-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-Hyper RPG I-YouTube yayo neTwitch Live Streaming Workflows ne-Blackmagic Design
I-Hyper RPG I-YouTube yayo neTwitch Live Streaming Workflows ne-Blackmagic Design
Fremont, CA - Julayi, 10, 2019 - Blackmagic Design Namhlanje umemezele ukuba indawo ye-Hyper Rabbit Power Go (Hyper RPG), indawo yokubutha kwi-intanethi ejoliswe kwividiyo kunye nebala lokudlala, iincwadi zee-comic, ii-movie kunye nokunye, ifake i-Pocket Cinema Camera 4K, i-ATEM Television Studio Pro kunye ne-ATEM Television Studio HD baphila umtshini wokuvelisa kunye nokunye ukudubula nokuhlalisa ngokujikeleza iiyure ezingama-30 zeprogram ngeveki kwizithuthi zayo ze-YouTube kunye neTwitch.
Yadalwa ngo-2015 ngumqhubi wesantya we-Jordan uJewe Weisman (BattleTech, Shadowrun) kunye nomqhubi we-Geek kunye ne-Sundry Twitch umqhubi wendlela yokubonisa u-Zac Eubank, i-Hyper RPG idlulisa imida yokubhaliweyo kwebali kunye nokwabelana ngamava okudlala kwiwebhu nakwehlabathi jikelele. I-Hyper RPG iya kuhlala iintsuku ezintlanu ngeveki ngexesha lemini, kwaye iziteshi zayo ze-YouTube kunye neTwitch zitsala ngaphezu kwe-44 izibukeli eziyingqayizivele kule mijelo ephilayo. Imiba yokuqukethwe ukusuka kumdlalo odlalayo odlala imidlalo, njengamaDunge kunye neeDragons, kwiTwitch kwiindaba eziphezulu kunye neempendulo ze-movie trailer kwi-YouTube.
"Njengoko saqalisa i-Hyper RPG kwiminyaka emine edlulileyo, sisebenzise Blackmagic Design. Sinee-studios ezimbini ezixutywe nge gear, kwaye sincike kuyo kakhulu, "watsho uEubank. "Sisanda kufaka iPomposer Cinema Camera 4K, i-ATEM Television Studio Pro i-4K, i-ATEM ye-Television Studio HD kunye nokuphakamisa nokuvelisa iimveliso zethu. "
I studio encinci ye-Hyper RPG ifakwe kwi-Pocket Cinema Camera 4K kunye ne-ATEM Television Studio HD ukudubula umxholo okhexeshana we-YouTube, owona uninzi lwezityalo zep pop. Izihloko ezibandakanyiweyo zibandakanya iimpendulo ze-movie trailer, iingxoxo kwiimboniselo zakutsha ze-superhero kunye nomxholo othi "u-snackable".
"Asinayo iqela elikhulu, ngoko sinokugaya njenge-Pocket Cinema Camera 4K kunye ne-ATEM Television Studio HD uphelele, "wongezelela u-Eubank. "Zilula kakhulu ukusebenzisa kwaye azidingi ukucacisa okuninzi, okuvumela wonke umntu ukuba angene ngaphakathi aze abambe umxholo njengoko kufuneka ngaphandle kokulahleka intsimbi."
I-Pocket Cinema Ikhamera 4K ivumela i-Hyper RPG ukudubula i-crisp, i-4K umfanekiso we-YouTube. Ukukwazi ukubhaka kwii-LUT njengoko kufunekile kuye kwaba luncedo olukhulu kwiqela njengoko benalo i-LUT eyahlukileyo kwimiboniso eyahlukileyo. U-Eubank wachaza, "Sisebenza kwishedyuli eqinile kangangokuba kufuneka silondoloze ixesha elininzi kunokwenzeka kwiposi. Sineembonakalo ezizodwa ezakhelwe umboniso ngamnye ukuba sisigcine njenge-presets kwikhamera. Sinokuzilayisha phambi kokurekhoda kwaye silondoloze iqela lethu lokuthumela ixesha. "
Inkomfa yefom yefom ehambelana ne-XLR yokufakelwa kunye nokulawulwa komsindo nayo iqwalaselwa njengenzuzo enkulu kuba igawula inani lempahla eyongezelelweyo efunekayo.
I-ATEM Television Studio HD Ivumela iqela ukwenza iiprogram ezininzi zekhamera kunye nokusika umboniso njengoko kwenzekayo, kwakhona kuphelisa umsebenzi onzima wokuvelisa umsebenzi. Ukuqulunqwa kwe-compact kuboniswe ukuba luncedo kakhulu, njengoko banokuhamba nalo msebenzi wentsimi.
I-studio yesibini ibandakanya i-ATEM Television Studio Pro 4K, i-recorder ye-HyperDeck Studio Mini, i-UltraStudio HD Ukuthinjwa kweminye kunye nokudlala idivaysi kunye neeNkampani eziMnyama zoMnyama eziMnyama ukudubula yonke into yokuTwitch, equkethe umdlalo ophezulu wokudlala kwethebula kunye neengxoxo ezinzulu kwiimidlalo ezahlukeneyo kunye nochungechunge. Ezi zisasazo ziba namaqela amaninzi ajoyina iziqephu zeempembelelo ezongeziweyo kunye nekhono lokubhala ibali.
"Ii-7 zeeNkhamera ze-Blackmagic Studio ezisekwe kwisikripthi sethu sesibili zixhunywe kwi-ATEM Television Studio Pro 4K. Sahlula ezininzi zezi zibonakaliso kwaye sibangenisa kwikhompyutha. Enye yiprogram yethu epheleleyo yokutya, kuquka imifanekiso, ngelixa ezinye zihamba ngokukhawuleza kwikhadi lethu lokubamba ikhompyutha, ngoko sinokutya okucocekileyo ngaphandle kwemifanekiso. Senza oku njengenxenye ngenxa yokuba yonke imifanekiso yezithombe kwiifestile zezithombe zenziwa kwesoftware kunokuba i-hardware ngenxa yeemfuno ezikhethekileyo zeTwitch, "watsho uEubank.
Waqhubeka wathi, "Ukulungiselela ukuvumelanisa iinjongo zethu, siqhuba yonke i-audio yethu nge-ATEM Television Studio Pro 4K uze uyivelise kwikhompyutha. Senza umxube opheleleyo phantsi kweemveliso zethu zeekhompyutha kunye neziphumo nge-ATEM Television Studio Pro 4K ngokunjalo. "
Nangona i-ATEM Television Studio Pro i-4K inamandla amakhulu, ubungakanani bayo be-compact beyona yintengiso enkulu ye-Hyper RPG ukususela kwithuba le-premium kwi-studio.
U-Eubank wongezelela, "Xa sidlala amaDungeons & Dragons, siya kuba nabantu abathandathu ukuya kuthi. Sonke sihleli etafileni enkulu, esishiya kwigumbi elincinci lethu. I-ATEM Television Studio Pro ye-4K yoqulunqo lwe-compact iyinzuzo enkulu kithi. "
Ukongeza, i-Hyper RPG ine-HyperDeck Studio Mini kunye ne-UltraStudio HD I-Mini eyakhelwe ekuphumeni kwayo emsebenzini ngexesha lonke. Barekhoda emininzi imilambo ngenxa yokuba umphumo kwi-Twitch yi-5,000 kilobytes ngesibini.
"Ngamanye amaxesha iinkonzo ze-Twitch ziya kugxininiswa, ngoko ke senza izikhokelo ezibonisa ukuba siyazibona iimpawu ezibonakalayo kangcono kubo, kwaye siza kuzilayisha ezo ze-YouTube njengezicwangciso ezicocekileyo endaweni yokuthumela ngaphandle kwi-Twitch, ngoko umgangatho we-nicer, "watsho uEubank.
kunye Blackmagic Design ukuxhobisa ngokupheleleyo ukuhamba kwayo kwemisebenzi yokuhamba, i-Hyper RPG iye yakwazi ukuba yinkampani yokuvelisa kunye nabaqulunqi bezinto. Ukuguqulwa kwamagesi kunye nokukhululeka kokusetyenziswa kuye kwabanceda iqela lihlale litshintsha kwaye lisebenzisana. Ngenxa yoko, i-Hyper RPG inako ukulungelelanisa ngokukhawuleza umxholo ukuhlangabezana neemfuno zabaphulaphuli.
Iifayile zeMveliso yeComputer Cinema Ikhamera 4K, i-ATEM ye-Television Studio Pro i-4K, i-ATEM ye-Television Studio HD, HyperDeck Studio Mini, UltraStudio HD I-Mini, i-Blackmagic Studio Iikhamera nazo zonke ezinye Blackmagic Design iimveliso ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-Sigma fp yokuQalisa ukuHambisa ngo-Okthobha 25, 2019 - Oktobha 10, 2019
I-Red Giant ikhupha i-Epic Gqibezela umdlalo weTrones VFX Tutorial Series: Iidragons - Oktobha 4, 2019
I-URSA Broadcast captures ibambe i-Chile yeThelevishini yeTV yeAmor a la Catalán - Oktobha 3, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Blackmagic Design I-Blackmagic Design ATEM ye-Television Studio Pro 4K I-Blackmagic Design Pocket Cinema Ikhamera 4K Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Hyper RPG i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw mveliso SJGolden - SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji TVU Networks Injini yeVidiyo	2019-07-10
Previous: Umhleli weVidiyo
next: I-Soularity Sound Relies kwi-NUGEN Audio kwiiRadio-Solid Products kunye neNkonzo yoMthengi